Jaal Abdii Raggaasaa.”Himata kuma tokko jijjiirtanii narratti yaaltanis dhugaan tokkittiin keessa hin jirtu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Abdii Raggaasaa.”Himata kuma tokko jijjiirtanii narratti yaaltanis dhugaan tokkittiin keessa hin jirtu.
Jaal Abdii Raggaasaa. “Himata kuma tokko jijjiirtanii narratti yaaltanis dhugaan tokkittiin keessa hin jirtu.
Ani hidhamaa siyaasaati. Dararaan anarra geessisaa jirtan dararama Oromoo kamiinuu adda miti. Namuma tokkotu dararama. Garuu dararamnikoo qabsoo bilisummaa Oromoo ni finiinsa. Kumaatamootas dhiiga danfisee qabsootti maka, isa jirus ni jabeessa malee tasumaa duubatti hin deebisu, jedhaatii warra isin ajajanitti naaf himaa. Kanaan achi waanan jedhu hin qabu” Jaal Abdii Raggaasaa.
Hidhamaa manni murtii mirga wabii eegeef poolisiin gadhiisuu erga didee lubbuunsaa mana hidhaa keessatti darbe.
Ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeessaa booda humna magaalaa Walisootti humna waraanaa mootummaatiin qabamee kan hidhame dargaggoo Malkaamuu Duulaa halkan edaa (Fulbaana 16/2020) mana hidhaa keessatti lubbuunsaa darbuun dhaga’ame.
Dargaggoon kun magaalaa Walisootti mana murtiitti dhiyaatee akka mirga wabiin lakkifamu manni murtii ajaja kennus poolisiin garuu gadhiisuu didee halkan ajjeefamee argame.
Diraamaan PP itti fufe!!
OMN: ( Fulbaana 16, 2020) Manni murtii ajaja mirga wabii gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaaf kanaan dura eegamee ture, poolisiin hojiitti hiikuu dhabuu isaa mormuun, Mallasaan Atattamaan hiikamuu qaba jechuun har’as ajaja dabarsee jira.
Poolisiin Finfinnee yoo Mallasaa Dirribsaa kan hiiku hin taane, gaafa Fulbaana 08, 2013)tti mana murtiitti dhihaachuun deebii akka laatu ajaja dabarseera.
OMN: Turtii Prof. Asfaaw Bayyanaa waliin (Ful 15, 2020)
Dubbataa ABO PP keessaa! ABOn kun waanuma gaarii godhe; jara san PP keessatti ramaduun isaa waanuma gaarii dha. PP keessaas nama qabaachuuun hin badu.
Jenneerra! Waan PPn guyyuu dubbatu karaa EBC fi OBN ummatatti himuu hin dagatiinaa!! Waan keessa tolfannu hedduu qabna.
#Dirreen inccinni ammale rakkoo keessa jirti kan mana hidhaati gadii dhisuu didaan ajaaja mana murtii wajjiri polisii fudhachaa hin jiruu namoota kanan duraa imanan irrati baname mana murtitti ji’a lamaaf dedebisa turan manni murti annaa ji’a 3 itti murtesee karchalee amboo geessan ol iyyanoo fudhatan manni murti olanaa mirgaa wabii qarshii kuma tokkon egeef gadii dhisuuf kana wajjiri polisii anna dirree incinni himanaa biraan qaba jedhe debisee incinniti hidhee jiraa
1 Indalkachoo Dirribaa
2 Galaanaa Camaadaa
3 Nuguusee Jifaaraa
isaa kun ammayuu wajjira polisii anna dirree incinni keessatti rakacha jiruu
kaleesaa immo dabalatan haadhaa mana Gaddisaa Fullaasaa egaa isaa barbadan dhabaan isheen qabaan hidhaan namni akka dhaaqee hin dubisnee irraa dhorkan jiruu waan irraa cistuuf nyaataas ufaana tokko olii galchuuf didaan Tizitaa Abdisaa Jedhamti
hikaan edaas mana obbo Dirribaa Giddii (Abba mintee )namaa jedhamu cabsan senuun abbaan mana kee eessa jiraa fidii jedhaan haadhaa warra isaan rebaan ba’an kanan duraas haadha warra isaa ji’a lamaf hidhaan rebba turaan abbaa warra kee fidii jedhani rakkisaa turaan rakkoo baay’ee ulfaata keessa jirtii yeroo amma dirreen inccinni.
Abiy Ahmed Ali ! This is pure punditry!